Vokatra sy mpamatsy sivana karbonina mavitrika | kejia
Azo ampiasaina betsaka amin'ny rafi-panafody sy rivotra isan-karazany izy io, ary manana ny fiasan'ny vovoka sy ny fanalefahana volo, izay afaka manatsara ny kalitaon'ny rivotra anaty.
1. Ny karbaona ampandehanana dia vita amin'ny akorandriaka, ary manana hetsika tetrachlorination mihoatra ny 60%.
2. Ny sivana karbona navitrika dia manana fahaizan'ny adsorption 100%.
3. Ny endriny ivelany dia azo vita amin'ny baoritra tsy tantera-drano, fefy vy vita amin'ny vy na vy vita amin'ny aliminioma ary vy vy.
4. Araka ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana, ny fitaovana samihafa sy ny fitaovana karbaona mihetsika dia azo fidina, toy ny poti-karbaona mihetsika, lamba tsy tenona, sombin-tsolika ary sombin-takelaka karazana sivana.
Ireo karazan-tsivana fanadiovan-drivotra sivily, singa sivana fiara mandeha amin'ny fiara, fividianana rivotra sns.
Sivana karbaona navitrika.
Sivana fanivanana karbaona mavitrika (faritra 3).
1. Karbaona mahery vaika catalytic avo lenta ary misy faritra amboniny manokana afaka manaparitaka gazy manimba (TVOC) sy poti tsy hitan'ny maso mitanjaka.
2. Ny fahombiazan'ny deodorization dia mety hahatratra mihoatra ny 95%.
3. Karazan-karbaona mavitrika isan-karazany no azo angonina, karibonin'ny voanio, sns
4. Ny famolavolana karbaona ampandehanana dia azo alamina hanatsarana ny fahombiazan'ny fanesorana ireo entona manimba sasany, toy ny formaldehyde, amoniaka, benzène, sns.
Sivana karbaona navitrika karazana kitapo
Ny haavon'ny fahombiazan'ny filtration G3 ~ H13 dia misy.
Vita amin'ny fibre karbaona mihetsika sy ny lamba tsy tenona izy io, izay afaka manala amin'ny fomba mandaitra ny karazana fofona hafahafa rehetra eny amin'ny rivotra.
Fahaizan'ny adsorption mahery, fahombiazan'ny fanesorana avo lenta ary fampisehoana azo antoka.
Fametrahana sy fikojakojana mora, lanja maivana, fahaiza-miasa matanjaka.
Izy io dia azo ampiasaina miaraka amina fefy galvanized, endriny firaka aliminioma, endriny plastika na fefy vy tsy misy fangarony.
Ny fotoana fanoloana dia miankina amin'ny hatetika sy ny toerana fampiasana.
Raha matetika ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ny fitaovana fanivanana ary manana takiana avo amin'ny filtration dia azo soloina isaky ny 2 ~ 3 volana. Na izany aza, raha toa ka somary ambany kokoa ny vovoka sy ny loto ao amin'ny toerana fampiasana dia azo soloina isaky ny enim-bolana eo ho eo.
Ny fotoana fampiasana dia tsy tokony hihoatra ny herintaona.
Raha tsy jerenao ny filentehan'ny masoandro, dia ho very ny asany ao aorinan'ny herintaona. Noho izany, raha te-hiantoka ny fiasan'ny sivana karbona isika dia mila manolo ny sivana vaovao ao anatin'ny herintaona. Raha tsy izany, na dia ireo fitaovana fanivanana vaovao aza dia mety tsy ho afaka hanao filtration be dia be any situ.
Teo aloha: Car sivana kabine
Manaraka: Fanadiovan'ny rivotra HEPA
Sivana fantsona entona mandeha ho azy
Sivana fanakanana karbaona
Carbon Pm 2.5 Sivana